အလွဲသုံးစားမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများမူးယစ်ဆေးဝါးသည် dopamine neurons (2003) - Your Brain On Porn တွင် synaptic adaptation ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
comments: စိတ်ဖိစီးမှု, စိုးရိမ်ပူပန်လုံးကိုဆုလာဘ်ဆားကစ်ကိုသက်ဝင်ရာ neurotransmitters (norepinephrine) နှင့်ဟော်မုန်း (cortisol), ၏တူညီသောအရောအနှောများနေတဲ့လွှတ်ပေးရန်စေစိုးရိမ်နေကြသည်။ ဒီလေ့လာမှုကစိတ်ဖိစီးမှုစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများလုပ်ပေးကဲ့သို့တူညီသောလမ်းအတွက်ဆုလာဘ်အဆောက်အဦများ sensitize နိုင်သည်ကိုပြသသည်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးပြီးသား desensitized ဦးနှောက်ကိုတက် jacks အဖြစ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တုန်လှုပ်ဖွယ်, စိုးရိမ်ပူပန်ထုတ်လုပ် porn နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ကျနော်တို့တုန်လှုပ်ဖွယ်, စိုးရိမ်ပူပန်ထုတ်လုပ်အမျိုးအစားများမှတင်းမာမှုဒီယန္တရား၏အားသာချက်ယူသံသယရှိကြသည်။
အာရုံခံဆဲလျ။ 2003 Feb 20;37(4):577-82.
Saal: D, dong Y ကို, Bonci တစ်ဦးက, Malenka RC.
နန်စီ Pritzker ဓာတ်ခွဲခန်း, စိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာသိပ္ပံဌာန, ဆေးပညာ၏စတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်ကျောင်း, Palo Alto, CA 94304, USA ။
အာရုံခံဆဲလျ။ 2003 ဧပြီ 24; 38 (2): 359 ။
တိရစ္ဆာန်များနှင့်လူသားနှစ်ဦးစလုံးအတွက်မူးယစ်ဆေးရှာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး Self-အုပ်ချုပ်ရေးသူတို့ကိုယ်သူတို့အလွဲသုံးစားသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဤတွင်ကျနော်တို့လုပ်ဆောင်ချက်ကွဲပြားခြားနားသောမော်လီကျူးယန္တရားများအဖြစ်စူးရှသောကဖိစီးမှုနှင့်အတူအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေး Vivo အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်နှစ်ဦးစလုံး midbrain dopamine အာရုံခံအပေါ် excitatory synapses မှာအစွမ်းသတ္တိကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ အနည်းဆုံးအလွဲသုံးစားမှုအလားအလာနှင့်အတူ Psychoactive မူးယစ်ဆေးဝါးများကဒီပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပါဘူး။ စိတ်ဖိစီးမှုများ, ဒါပေမယ့်မရကိုကင်းများ၏ Synaptic သက်ရောက်မှုသည် glucocorticoid အဲဒီ receptor ရန် RU486 ပိတ်ဆို့ထားပါသည်။ ဤရလဒ်သည် dopamine အာရုံခံအပေါ် excitatory synapses မှာ plasticity စွဲခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အတူ၎င်း၏ interaction ကမှပံ့ပိုးအဓိကအာရုံကြောလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေခြင်းငှါဤသို့စွဲလမ်း၏အန္တရာယ်လျှော့ချများအတွက်ဆွဲဆောင်မှုကုထုံးပစ်မှတ်ဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။